Buugga Dhacdooyinka Layaabka Leh Ee Genius World Record Oo Shaaciyey Haweenayda Adduunka Ugu Gadh Weyn - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Buugga Dhacdooyinka Layaabka Leh Ee Genius World Record Oo Shaaciyey Haweenayda Adduunka...
Buugga dhacdooyinka layaabka leh lagu ururiyo ayaa soo saaray dhacdooyinkii ugu layaab badnaa sannadkan sii dhammaanaya ee 2016 isaga oo si gaar ah u soo qaatay haweenayda loo aqoonsaday midda ugu gadh weyn haweenka adduunka wakhtigan ee ugu da’da yar. Inkasta oo ay jiraan haween gadh weyn lihi haddana waxa ay Harnaam Kaur noqotay oo loo aqoonsaday haweenayda ugu da’yar ee ugu gadh weyn.
Harnaam Kaur oo 24-jir ah ayaa noqotay haweenay la baxday gadhka ragga oo kale kadib markii timo aad u badani gadhkeeda ka soo baxeen oo ay in muddo ahna dhaqaalaynaysay oo aanay tin kali ah ka xiirin kadib markii la sheegay in khalal ku yimid hormoonadeedu sababeen in timo saa’id ahi ka soo baxaan wajigeeda iyo laabteeda.
Harnaam Kaur oo ka soo jeeda deegaanka Slough Berkshire ee dalka Ingiriiska ayaa dhalatay sannadkii 1990-kii waxaanay dhakhaatiirtu sheegeen in jidhkeeda uu ku badan yahay hormoonka kobciya timaha waxaana jidhkeeda ku badan timo badan illaa gadhkeedu la mid noqday gadhka ragga. Haweenaydan oo u warramaysay idaacadda BBC iyo wargeyska Daily Mail, warbixinteedana idiin soo turjuntay shabakadda tusmoonline waxa ay sheegtay in ay dareemayso farxad iyo deganaansho oo aanay wax werwer ah ku qabin gadhka ragga oo kale ah ee ka soo baxay. Waxa kale oo ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay abaal marinta la siiyey ee ku guulaysiga in lagu daro buugga dhacdooyinka layaabka leh ee adduunka (Genius World Record) oo loo aqoonsado haweenaydii ugu da’yarayd ee ugu gadh weynayd. Waxa kale oo ay sheegtay in ay ka guulaysatay sannado badan oo ay cidhiidhi nafsi ah ku jiray dadkuna aad ula yaabi jireen oo ku soo ururi jireen marka ay suuqyada iyo goobaha waxbarashada u baxdo eel ala yaabo gadhkeeda.